April 1, 2018 – HORNAFRIC MEDIA
Dhalinyaro Soomaali ah oo loo xiray dil loo geystay Gabar Canada u dhalatay .
Posted on April 1, 2018 by Queen Kiin
Laba wiil oo Soomaali ah iyo mid kale oo ajnabi ah ayaa lagu xiray Magaalada Toronta ee dalka Canada ka dib markii lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dil ka dhacay Magaaladaasi. Booliiska Canada ayaa bilaabay 16-kii bishii Maarso inay dad u qabtaan dil loo geystay gabar u dhalatay Wadankaasi. Mid ka mid ah labada wiil ee Soomaalida ah ayaa dacwad oogayaasha waxay sheegeen inuu waday Gaarigii lagu fuliyay dilkaasi Maxkamadna la soo taagi doono…
Dayax Gacmeedka Ka Lumay China 7 Sano ka hor Oo Berri Soo Dhacaya!
Dowladda China ayaa shaacisay in 24-ka saac ee soo socda uu dhulka ku soo dhacayo Dayax Gacmeedka lagu magacaabo Tiangong-1. Laanta cirbixiyeennada China iyo midda Yurub ayaa isku raacay in saadaasha xawaaraha Dayax Gacmeedka ay muujineyso in maalinta Berri oo Isniin ah uu dhulka ku soo dhacayo. Dowladda China ayaa horay u sheegtay in Tiangong-1,Hawada loo diray sanadkii 2011kii ilaa 2022kana la doonayay in uu shaqeeyo. Waxaa ay Dowladdu sheegtay in Tiangong-1 uu 24kii saac…
R/wasaaraha oo maantay Kormeeray wasaarada Maaliyada iyo Wasiir Bayle….
R/wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xassan Cali Kheyre ayaa kormeer shaqo iyo bogaadin ku tagay Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Dalka kadib guul ay wasaaraddu ka soo hooysay Dakhliga gudaha Sadexdii Bilood ee la soodhaafay. Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in sare loo qaado Dakhliga Dowladda soo gala taasoo Sadexdii bil ee lasoo dhafay ay noqotay mid aad uga sareysa sanadihii hore dakhliga soo xaroon jiray. R/wasaare Xassan Cali Kheyre ayaa madaxda Wasaaradda Maaliyadda ka…